CHII CHINONZI ZISO RECHITATU, UYE ZVINOITII? - Kunamata
maitiro ekudzima apuro wachi akateedzana 2
wifi haishande pa iphone
ipod app chitoro chisiri kushanda
nei yangu spotify isiri kushanda
ipad inotanga kuchaja yobva yamira
CHII CHINONZI ZISO RECHITATU, UYE ZVINOITII?
Vanhu vazhinji vanowanzoziva nezve izvo zvinonzi ziso rechitatu. Asi vanhu vazhinji havazive chaizvo kuti ziso rechitatu rinoshanda sei kana vanhu havana chokwadi nazvo. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, mibvunzo inowanzo simuka, senge, chii icho ziso rechitatu rinoreva, chii chinoita uye chii icho uye pakupedzisira - uye kwete zvisina kukosha - chii chaungaite nacho?
Tinodaidza ziso rechitatu, iyo nzvimbo iri pakati pehuma yako. Pamusoro peye tsiye chete. Kunyanya nevanhu veIndia, iwe unoona iyo nzvimbo inoratidzwa neine tsvuku dot paziso rechitatu. Ziso rechitatu, kana chechitanhatu chakra, inomirira intuition, fungidziro, huchenjeri hwemukati, uye kuona.
Ziso rechitatu dzimwe nguva rinonzi ziso rekutanga. Izvi zvine chekuita nenyaya yekuti pakuzvarwa, iro ziso rechitatu richiri rakavhurika zvakakwana. Unogona kuziva izvi, semuenzaniso, vana vadiki vanogovana nyaya dzese neshamwari dzekufungidzira. Shamwari avo, kana iwe ukavabvunza, vari chaivo sezvavari. Zvishoma nezvishoma, nevanhu vazhinji, iri rechitatu ziso rinovhara zvakanyanya uye dzimwe nguva mukuzara kwaro.
Rovedza ziso rechitatu
Kuti uishandise, muzviitiko zvakawanda, unofanirwa kudzidzisa ziso rechitatu. Kune vanhu vazhinji, hazviitike zvoga.
Unogona kumisa ziso rechitatu, iro rinowanzo vhara zvakanyanya uye zvakare zvakare. Sezvakataurwa, kazhinji hazviitike zvoga; maitiro aunofanira kupfuura nawo.Kufungisisayakakodzera, pakati pezvimwe zvinhu, kukurudzira kuvhurwa kweziso rako rechitatu. Panguva yekufungisisa, iwe unogadzira iyo chinhu DMT. DMT inomiririra dimethyltryptamine uye inonzi indole alkaloid ine mamorekuru mamiriro.
Izvi zvinoenderana neyakanyanya kuzivikanwa neurotransmitter serotonin. Zvakare, huwandu hwezvipenyu hunogadzira DMT uye nekudaro haina kungochengeterwa vanhu chete. Hazvizivikanwe zvinoitwa neDMT muvanhu, asi zvinoita basa muzviroto zvinoonekwa uye nezviitiko zvekufa-kwekufa.
Kufungisisa, pamusoro pezvinhu zvakasiyana siyana, zvinokurudzira kuona kwako zvakadaro. Kana iwe ukaisa simba rako paziso rako rechitatu panguva yekufungisisa uye ukaita izvi nguva dzose, saka unodzidzisa rako rechitatu sezvarakaita. Kana iwe ukaita izvi zuva nezuva, uye izvo hazvidi kutora nguva yakawanda, iwe uchaona mavara akasiyana uye maumbirwo pane imwe nguva panguva yekufungisisa kwako.
Iwe unonzwa kunge wakareruka mumusoro, uye iwe unogona kubata izvi panyama. Izvo zvinogona zvakare kuitika kuti inozove yakanyarara uye nerima zvakare kwechinguva, uye iwe hausisiri kuona iwo mavara uye maumbirwo. Aya maitiro anoenderera uye anogona kuitika nguva nenguva.
Kuimba inzira zvakare yekuvhura ziso rechitatu. Kuchema ndiko kutaura zvine mutsindo kana kuimba kwemazwi kana manzwi. Kazhinji pane imwechete kana yakakwira mapandi maviri. Zvinonzwika sezvisinganetsi kuvanhu vazhinji.
Kuchema kunoshanda seinotevera:
Paunenge uchiimba, iwe unogara munzvimbo yakasununguka iwe, asi zvirinani zvakamira.
Kufema kwepamuviri kuri nani muzviitiko zvakawanda, asi zvirokwazvo, kana uchiimba, zvakanaka kushanda nekufema kwemudumbu. Tanga nekufema zvakadzika nemumhino kakawanda.
Exhale kuburikidza nemuromo uye ramba uchiita izvi kusvikira kushushikana mumuviri kwapera zvachose.
Paunenge wanyatso zorora, zvakanaka kuti uunze kutarisisa kwako kusvika pahuma pahuma yako pane ziso rechitatu.
Fungidzira iyo (indigo) bhuruu inopenya bhora panzvimbo iyoyo. Kunze kwekuona, zvakanaka zvakare kuyedza kuzvinzwira panzvimbo iyoyo.
Zvino chifemera mukati uye nerurimi rwako rwakanamirwa zvishoma pakati pemeno ako epamberi, zvinyoronyoro exhale uye edza kuburitsa ruzha THOHH pane mweya. Ita izvi zvachose kanomwe kanomwe mumutsara murunyararo. Kana zviri izvo uye zvine tambo chaiyo, iwe unowana iko kushomeka kwekutekenyedza manzwiro kwaunofungidzira bhora.
Ita ichi chiitwa pamwe nekujaira.
Zvirokwazvo, muzvinhu zvemweya, vanhu vanoda humwe humbowo. Zvichida yakafemerwa neyakavanzika iyo yakakomberedza nyaya yacho. Kuti ukwanise kuita chimwe chinhu nacho, iwe unofanira kutanga waziva pachako kana uri munzira chaiyo. Unogona kutarisa izvi zvichibva pazvinhu zvezuva nezuva. Izvo zvakakosha kuti iwe uzive nezvako kuti iwe unowanzo kusangana sei nezvinhu zvezuva nezuva, uye mushure mechinguva, iwe unowana kudzidziswa.
Isu tinotaura zvine hungwaru nezve zvinotevera zvinhu, pakati pevamwe:
Zviroto zvinogona kusangana zvakajeka kupfuura zvakajairwa.
Kurota kunogona kuvakwazve zvirinani mumashure, dzimwe nguva kunyangwe zvakanyatsotsanangurwa.
Kazhinji kana zvirinani kazhinji kupfuura zvakajairwa deja vu s panguva dzakasiyana kwazvo dzezuva.
Unoziva zvichaitika kunyange zvisati zvaitika.
Dzimwe nguva unonzwa simba mudenga. Masimba asingakwanise kutsanangurwa, asi kuti iwe unofunga.
Iwe unogona kunzwa manzwiro kubva kune vamwe vanhu mumuviri wako wega.
Iyo ura ichinzwa iyo intuition inouya zvakanyanya.
Dzimwe nguva unoona zvinhu zvisina kunzwisiswa nevamwe.
Zvakawanda uye kazhinji rudzi rwekudzikama kwakadzikama kunouya pamusoro pako.
Chii chaungaite nacho?
Intuition chinhu chakakosha, asi zvirokwazvo munharaunda yekuMadokero, tinoda kuve nezvose zvinobatika uye tichidaro kuita nesainzi. Intuition ndeyegumbo kunzwa, uye kana iwe ukashanda pamatumbo kunzwa, saka izvo hazvibvi pane humbowo, kungonzwa. Dzimwe nguva sarudzo inogona kuitwa pamatumbo kunzwa senge yekukurumidza uye nekudaro inotyisa. Nekuda kweizvozvo, vanhu vazhinji vanofuratira yavo intuition, uye kana iwe ukaita izvozvo kwenguva yakakwana, iwe haugone kuwana izvo zvinokurudzirwa futi. Iwe unomira, sokunge zvakadaro, chinhambwe chidiki kubva pauri. Izvi, nepo uchishandisa yako intuition pane dzimwe nguva, yakakosha.
Uchenjeri hwemukati ndihwo zvakare ichokwadi chakakosha kuti chiyero chako chikwanise kuita sarudzo dzakanyatsoita uye zviite maererano. Zvakare, kune hwehungwaru hwemukati, haina kubva pasainzi, uye nekudaro dambudziko rimwe chete rinoshanda senge neiyo intuition. Kana iwe uchiziva kuibata zvakanaka, inogona kupfumisa hupenyu hwako.
Kufungidzira kunogona kukubatsira nemaitiro ekugadzira, uye izvi zvinogona kuva chero chinhu. Ehezve, mupendi uyo ane pikicha mumusoro wake uye anoda kuiwana pane canvas. Asi iwe uri kungotsvaga chimwe chinhu chekongiri seimba yekare. Iwe unopinda muchivako chekare chisina kumboona kunanzva kwepende kwemakore uye uko makabati ekicheni adzoka kubva kumakumi emakore. Vanhu vazhinji vanobva vabuda nekukurumidza nekuti zvinoita kunge zvisingaite. Mumwe haagoni kuona muchiono; mumwe haakwanise kutarisa nepakati peshungu nepo chivakwa chakadai chingave nemukana wakakura.
Zvinhu zvisingaverengeke zvinokwanisa kutora chinzvimbo chakasimba muhupenyu hwako kana ukashinga kutanga neziso rako rechitatu. Kune mumwe munhu, chimiro chemweya, uye nekudaro, iyo 'yepamusoro-yekubata', yakakosha, uye kune imwe, inogona chete kushandiswa mukuita kwemazuva ese. Iko hakuna chakanaka kana chakashata mune izvi, chete dudziro. Asi chero chikonzero chinoita kuti uve unoshanda neziso rako rechitatu, nei uchiregedza richienda kana richikwanisa kupa chimwezve chinhu?
Ngirozi Nhamba 333 uye zvinoreva zveMweya - sei…
Chii Chinoreva Yin uye Yang?
Zvinotaurwa Neimba Yako Nhamba uye Mugwagwa Nezve Hupenyu Hwako
Zviratidzo Uye Kutenda Mashura - Zviratidzo ZveMufaro Uye Nhamo
Minyengetero yemagweta nevatongi
Iyo ABALONE SHELL NESIMBA RAYO REMAZWI